Ny orinasa JOYSUN dia natsangana tamin'ny taona 2005, mifantoka amin'ny famokarana plastika sy paingotra mihosotra vita amin'ny plastika, additives WPC ary PVC stabilizer Ca-Zn, dia mendrika ny R&D ary manome serivisy fanondranana ihany koa. Ankoatry ny famokarana additives, JOYSUN dia mpanome tolotra teknika ary mpanentana amin'ny sehatry ny plastika sy ny fingotra.
Fitaovana maoderina maoderina maoderina miompana amin'ny automatique sy semi-automatique maherin'ny 10, miaraka amina famokarana fingotra sy plastika 30.000 taonina isan-taona.
Fitaovana pelletizing 2, miaraka amin'ny fahaizan'ny famokarana 2000T sombin-drakitra miompana 2000T.
Talantalana fitehirizana finday avo lenta, fitehirizana entana maharitra 4000 taonina.
86 andiam-pitaovana fanandramana matihanina toa ny thermoFisher infra-red spectrometer ， STA / TGA, STA / DSC sns
Ekipa R&D miaraka amin'ny PHD, taranja fampianarana Master.
Fanamarinana ny voninahitra
Mihoatra ny 20 patantin'ny famoronana, ary vitsy ny valim-pikarohana teknika azo.
Ny orinasa dia mihazakazaka eo ambanin'ny fanamarinana ISO, ny famokarana automation Advanced sy ny fonosana dia ampiasain'ny teknisianina mahay, manome antoka ny kalitaon'ny vokatra sy ny fahamarinan-toerana, ny toetra miavaka sy ny kalitao miavaka dia ny filozofia orinasa JOYSUN, hanome vahaolana fanampiny mahomby sy vahaolana tafiditra ho an'ny indostrian'ny polymer izahay
Fandraisana an-tsena sy vola miditra
Inona no azonay atao ho anao?
1.Vahaolana ho an'ny mpamatsy palstika sy fingotra
Mba hihaonana amin'ny filanao vokatra, ny ekipa teknika misy anay manam-pahalalana momba ny vokatra matihanina dia mampiasa traikefa momba ny indostria sy angon-drakitra manankarena mba hanomezana vahaolana momba ny vokatra, ao anatin'izany ny formula, ny teknolojia sns. tsena.
2. Mpanome adiresy
1.Rihana WPC / SPC (stabiliser Ca-Zn)
2.Sarin-tsarimihetsika PS / PVC (Agent serasera CF series)
3.PVC / lamba firakotra (coating mihosin-javatra roaming)
4.Panel / mombamomba ny rindrina PVC (maso mihosotra / stabilizer ca-zn)
5.Fitaovana fanindronana an-trano (masterbatch amin'ny foza-maso)
6.Volom-bovoka PVC (fotsifotsy avo / mpiakanjo sela misimisy)
7.Hang / tsindrona fanindronana PE / PP (mpandrendrika foaming injection ho an'ny fihenan'ny & anti-shrinkage)
8.Kilalao ankizy tsindrona (masterbatch an'ny PS / ABS / PC)
9.Kiraro plastika (Agne tsy amboarina ammonia ambany)
10.Tombo-kase fametahana fiara (Agneur TPE / TPV / EPDM)
11.Auto Door panel / Dashboard (Auto anatiny maivana foaming agents)
12.Auto NVH System (NVH tombo-kase mivelatra)
13.Yoga Mat (EVA / XPE foaming agents)
14.Modely momba ny fiaramanidina EPP (agents Nucleation foaming)
15.PE / PP / PVC WPC Decking (H andiany fanosotra mitambatra)